गाउँ ठाउँमा सन्चालित मनि ट्रान्सफरले थप कमिशन लिन्छन : आईएमईलाई संज्ञान छ ? – ebaglung.com
गाउँ ठाउँमा सन्चालित मनि ट्रान्सफरले थप कमिशन लिन्छन : आईएमईलाई संज्ञान छ ?
२०७५ श्रावण १९, शनिबार १७:२१	Top News, थप समाचार, विविध
बागलुङ २०७५ साउन १९ । बागलुङ जिल्लाको विभिन्न स्थानहरुमा मनी ट्रान्सफर सन्चालन गरेर विदेशबाट पठाउने रेमिटेन्स रकम सरोकारवालाहरुलाई बुझाउने काम भैरहेको छ । रकम पठाउने व्यक्ति वा संस्थाले रकम पठाउदा नै पठाएको रकमको शुल्क दस्तुर बुझाएर मात्रै पठाउने गर्छन । रकम भुक्तानी दिने मनि ट्रान्सफरले जति रकम उल्लेख छ त्यति रकम प्राप्त कर्तालाई बुझाउनु जरुरी हुन्छ अर्थात अन्य कुनै शुल्क लिन पाईदैन । तर जिल्लाका ग्रामिण ईलाकामा सन्चालित यस्ता मनि ट्रान्सफर सन्चालकहरुले आफु खुसी केहि रकम कमिशन लिने गरेको खुलासा भएको छ ।
काठेखोला गाउँपालिका बिहुँ रिजाल चोकमा सन्चालित काउचा मनि ट्रान्सफरले विदेशबाट पठाएको रकममा थप कमिशन लिएर भुक्तानी दिने गरेको समाचार प्राप्त भएको छ । सेवाग्राहीले जति रकम हो पुरा दिनुस किन कमिशन लिनुहुन्छ ? भन्दा बागलुङ गएर रकम बुझ्दा बसमा जाँदा आउदा एक हजार भन्दा बढी खर्च हुन्छ यहाँ गाउँघरमै सुविधा दिएर केहि रकम लिँदा कुराकाट्ने ! भन्ने गरेको पीडितहरुले बताएका छन् ।
सो मनि ट्रान्सफर केहि दिन बन्द भएर पुन सन्चालनमा आएको स्थानीयले बताए । विदेशबाट आफ्नो घरमा रकम पठाउने एक व्यक्ति र मनि ट्रान्सफर सन्चालक बीच कमिशन लिएको सम्वन्धमा निकै चर्काचर्की भएको भ्वाईस रिकर्ड (आवाज) ईबागलुङलाई प्राप्त भएको छ ।
विकट ठाउँमा सेवा दिएको भनी पैसा कटाएर भुक्तानी गर्ने र किन चार्ज कटाएको भन्दा तेरो आफन्तलाई यहाँ न पठाई न भन्दै धम्काउदै आएको र तेरो पावर छ भने देखाई ,गर के गर्न सक्छ्स भनि समाजमा नपच्ने अश्लील शब्दमा गाली गलोज गरेको भन्दै एक जना ग्राहकले आईएमईलाई यसको जानकारी छ कि छैन भनि प्रश्न गरेका छन् ।
सपिङ मल निर्माण गरेरै भएपनी सरकारले व्यवसाय गर्न दिन्छः मन्त्री लम्साल
मिर्गौला रोगबाट पीडित गल्कोट सर्दाखेतका कुमारलाई सहयोग गर्न परिवारको अपील